साबित्रीको चिन्ता : कसरी गर्ने छोरीको सुरक्षा ? |
साबित्रीको चिन्ता : कसरी गर्ने छोरीको सुरक्षा ?
प्रकाशित मिति :2017-08-18 14:20:44
लहान । बाढी प्रभावित जिल्लाका विस्थापित परिवारहरु अहिले पालमुनी बसिरहेका छन् । सिरहाको लहान नगरपालिका १, बाढी प्रभाबित मध्ये चार घर विस्थापित भएका छन् । त्रिपाल हालेर बसेका विस्थापितहरुलाई अहिले छोरीहरुलाई कसरी सुरक्षित गर्ने चिन्ता बढेको छ ।
खुल्ला चउरमा बसेका बाढी प्रभाबित उनीहरुलाई निरन्तरको वर्षा र भेलबाट जति चिन्तित बनाएको छ । त्यो भन्दा बढी खुल्ला चौरको बासमा छोरीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
लहान नगरपालिका १, की साबित्री देवीको घर शुक्रबारको बाढीले भत्कायो । घर भत्केपछि पाँच जना छोराछोरीसहित अहिले उनी पालमा बस्दै आएका छन् । साबित्रीका श्रीमान् मजदुरी गर्न पन्जाब गएका छन् । साबित्री तीन जना छोरी दुई छोरा सहित पालमा खुल्ला चौरमा बसेकी छिन् ।
साबित्री लाई पालको बसाईले न दिनमा भोक न रातमा निन्द्रा भएको छ । छोरी र आफु कसरी सुरक्षित भन्ने चिन्ता छ उनलाई । ‘दुईवटी छोरी छन् । समय यस्तो छ । रात बिरात कसैले केही गरेदिए मैले के गर्ने ?’ साबित्रीले चिन्ता सुनाईन् ।
उनीहरुलाई विभिन्न संघ संस्थाले सुख्खा खानेकुरा लत्ता कपडा, नगरपालिकाले पाल राहातको रुपमा दिए पनि उनलाई घर बनाउने सामग्री दिएका छैनन् । त्रिपालमुनी न त ढोका छ न बारिएको नै छ । खुला ठाउँमा रहँदा महिला घरमुली भएको घरमा अझ सुरक्षा जोखिम बढेको हो ।
जिल्लाभरी यस्ता कति बाढी पिडितहरु जोखिममा छन् भन्ने तथ्याङ्क जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति तथा महिला बालबालिका कार्यलयसँग पनि छैन ।